About Plucial, Inc
Company Info / Contacts
Mba hanafainganana ny fanatontoloana izao tontolo izao amin'ny multi-teny + rahona teknolojia
Plucial dia, toy ny mahazatra fanatontoloana kokoa ho an'ny orinasa rehetra manerana izao tontolo izao, dia manolotra ny multi-teny vahaolana mandroso ny azy.
Nahoana no ny multi-teny vahaolana no voafidy.
(Machine fandikan-teny + olombelona fandikan-teny)
0 Firenena &amp; an-toerana
(Ho an'ny raharaham-barotra ny tsena dia izao tontolo izao ambaratonga)
about 0 %
(Manohana ireo mpampiasa aterineto manerana izao tontolo izao)
about 0 Billion olona
(Hahazoana mety ho mpanjifa avy amin'ny manerana izao tontolo izao)
Products fa amin'izao fotoana izao dia manana ny tolotra
GuidebooQ dia fanompoana izay afaka manao afa-tsy 10 minitra ny multi-teny WEB pejy toerana rehetra manerana izao tontolo izao. Afaka mikaroka amin'ny tenin-drazany, ary manome ny toerana Travel po kokoa ny dia lavitra vaovao manerana izao tontolo izao.
91 samy hafa fiteny
Safidy sy ny fitambaran'ny ny teny dia maimaim-poana
Simple dingan'ny fandikan-teny
Ny fandikan-teny dia tanteraka ao ihany no 3 dingana
Azo atao ny manova ny votoatiny mba ho aseho isaky ny teny
SEO isaky ny teny
Ny fiteny rehetra optimisé ho an'ny fikarohana
Tena tsara toy ny multi-teny sakafo
Expertise tsy ilaina
Fotsiny manao safidy tsotra fahan'ny
GuidebooQ dia namoaka ny hany Japoney amin'izao fotoana izao pirinty,
vonona ny hamoaka tamin'izany andro izany izao tontolo izao ny firenena sy ny faritra 200 no natao sahady.
Tsy vitan'ny hoe ny taratasy ny mpandeha hafa, dia izao mijanona rehetra ny andraikitra manoloana ny mandeha any ivelany.
Ankoatra ny fanampiana afa-tsy telo karazana fanamarihana ho HTML, miova ny multi-teny WEB toerana ny HTML mifanitsy amin'ny 91 fiteny.
Raha toa ka ny fahalalana ny HTML sy CSS efa manana ianao, dia afaka ho tolo-kevitra maro teny vahaolana mba izao mpanjifa Amin'ny MulCMS.
Na dia tsy manome nanomboka eo
Mba mahatsapa ny ambaratonga fanatontoloana izao tontolo izao dia tsy ampy fotsiny ny hery. Ny fikambanana izay mikendry ny hahatakatra ny fiaraha-monina maneran-tany aminay ny hoavy, isika, dia hanome ny rahona fonosana MulCMS fa afaka mora foana mampiasa ny multi-teny sy ny rahona teknolojia.
Server tsy ilaina
Mba mampiasa ny Google Cloud Platform, ny fahalalana dia tsy ilaina mihitsy ny momba ny lohamilina sy ny foto-drafitrasa.
External angona dikan-
Auto ampidiro eto ny mety afa-po ny mampiasa CSS selector HTML.
Contact koa multi-lingual
Mamaritra ny fanadihadiana loharanom-teny, ny fahafahana hampahafantatra anao amin'ny alalan'ny e-mail amin'ny alalan'ny fandikana ny am-boalohany dia fitsipika endri-javatra.
Janoary 9, 2015
Japana Fukuoka, Hakata-Ku, Fukuoka City Hakataekihigashi 1-12-17 birao New Gaea Hakata Station 3F
Aprily 9, 2016 New
Nandefa GuidebooQ azo namorona afa-tsy 10 minitra ny 91 samy hafa fiteny ny WEB boky mpitari-dalana ho any Japana ny eo an-toerana ireo tompona fandraharahana ho an'ny
Anisan'izany ny olona rehetra ao amin'ny startup manam-pahefana sy ny mpanao gazety, no miandry ny fanontaniana avy isan-karazany ny olona.
Ity takelaka ity dia mifanaraka amin'ny fiteny 91.